Na Machị 12 anyị nwere ike ịhụ weara "N" si Sony | Gam akporosis
Sony weputara usoro ihe omume "Future Lab" ma na atu anya ya "N"
Manuel Ramirez | | Noticias, Ngwaọrụ ndị ọzọ
Sony na-egwuri egwu na ihe omimi a n'oge na-adịbeghị anya iji ju anyị anya site n'ịga ihe omume na MWC 2016 ebe webatara usoro X ọhụrụ ahụ. Ọfọn, ọ dị ka ha achọghị ịkwụsị ịtụnanya anyị, ọbụlagodi mgbe emechara na usoro nke ejikọrọ Ngwa, ya na oru ohuru ohuru ya “Future Lab”, nke ga-ekwe ka ndị ọrụ nyere Sony aka na nzaghachi na ihe kwesịrị ka mma ma ọ bụ gbanwee.
Ka anyị kwuo na ọ bụ mmemme nghọta zuru oke na echiche mbụ nke ọrụ a ga-ekpughe n'oge na-adịghị anya. N'oge ahụ, ohuru ngo ga-amara site «N» Na ihe anyị nwere ike ikwu site na teaser nke ụlọ ọrụ ndị Japan bipụtara bụ na ọ ga-abụ ụdị ngwaọrụ weara.
Na "N" nwere ihe jikọrọ ya na egwu ma ọ bụ redio. Na ihe ọtụtụ nwere ike ịghọta dịka na anyị ga-eche ihu na Xperia Ear nke egosiri na MWC 2016, "N" na-akpọga anyị n'akụkụ ndị ọzọ, ebe ọ bụ na ngwaọrụ a weara agaghị achọ ka etinye ya na ntị. Na teaser, enwere ike ihu ihe n’olu mmadu, n’otu oge amalite ịzaghachi iwu olu.
Como ụfọdụ ụdị olu n’olu anyị, a ga - eweta ngwaọrụ “N” a na SWSW ogbako na Texas, ka ọnwa Machị dị na mkpụrụ ụbọchị iri na abụọ. Sony na-aga n'ihu na iri na atọ nke iji aha mkpado iji kpọọ ụdị ngwaahịa dị iche iche.
Banyere ọrụ "Lablọ nyocha Ọdịnihu", ọ nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ngwaọrụ ndị ejikọtara nke Xperia Eye ma ọ bụ ihe ngosi pụrụ iche pụtara ìhè. Ihe Sony choro bu tụlee na nzaghachi nke ndị ọrụ. A bara uru mpempe ozi e ji dozie na-ebuli «Concept for Marshmallow», ikekwe ROM kacha mma ma ọ bụ omenala oyi akwa maka gam akporo nke oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwaọrụ ndị ọzọ » Sony weputara usoro ihe omume "Future Lab" ma na atu anya ya "N"
Huawei P9 pịa oyiyi na-leaked